पुरुषका ५ संवेदनशिल अंग, जसमा महिला आकर्षित हुन्छन् ! - Experience Best News from Nepal
पुरुषका ५ संवेदनशिल अंग, जसमा महिला आकर्षित हुन्छन् !
महिला र पुरूषबीचको आकर्षण प्राकृतिक हो । सामान्यतया हामीले पुरूषहरू महिलाप्रति र उनीहरुको शरिरप्रति आकर्षित हुने गर्छन् भन्ने गरिन्छ । यो सत्य हो की पुरूषहरू महिलाप्रति र उनीहरूको शरिरप्रति आकर्षित हुन्छन् । तर, महिलाहरू पनि पुरूष र पुरूषको शरिरप्रति आकर्षित हुने गर्छन् ।
अध्ययनबाट के पत्ता लागेको छ भने पुरूषहरू महिलाप्रति आकर्षित हुन्छन् भने महिलाहरू ओछ्यानमा पुरूषसँग बढी आकर्षित हुन्छन् । पुरूषहरूको विभिन्न अंगप्रति महिलाको निकै आकर्षण हुने गर्छ भने उनीहरू उत्तेजित समेत हुने गर्छन् । थाहा पाऔ महिलाहरू पुरूषको कुन–कुन अंगमा आकर्षित हुन्छन्,
लिङ्गः महिलाहरू प्राय पुरूषको ठुलो लिङ्गप्रति आकर्षित हुने गर्छन् । महिलाहरू लिङ्गको आकार जति ठूलो भयो उतीनै बढी उत्तेजित हुने र सेक्सका क्रममा आनन्द लिने गर्छन् । यस्तै महिलाहरू पुरूषको यो अंग छोएर पनि उत्तेजित हुने गर्छन् ।
कानः पुरूषको कानको पछिल्लो भाग निकै संवेदनशिल हुन्छ । पुरूषहरुको छोटो कान महिलालाई निकै आकर्षित गर्ने गर्छ भने सेक्सका क्रममा पुरूषलाई कानको मद्धतले पनि उत्तेजित गर्न सकिने अध्ययनमा बताइएको छ । पुरूषको कानको पछिल्लो भागमा जिब्रो या नरम हातले चलाउँदा पनि पुरूषहरू उत्तेजित हुने गर्छन् ।
हिप्सः महिलाहरू सकेसम्म पुरूषको हिप्सको मोटाई कम भएको मन पराउँछन् । पुरूषहरूको हिप्समा यदी हल्का रूपले चलाउने हप भने पनि उनीरूलाई उत्तेजित पार्न सकिन्छ ।
छातीः ठुलो छाती भएको पुरूषलाई महिलाले निकै मन पराउँछन् । ठूलो छाती भएका पुरूषलाइ महिलाहरूले सहजै सेक्सका क्रममा उत्तेजित गर्न सक्ने बताइएको छ ।
ओठः पुरूषको संवेदनशिल अंगका रूपमा ओठलाई पनि लिने गरिन्छ । ओठमा गरिने चुम्बनले पनि पुरूषलाई उत्तेजित बनाउन सकिने अध्ययनहरूबाट निकालिएको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।